Kristy Zanak'ondrinay Paska, Fiangonana Eran-tany eran-tany Switzerland Switzerland (WKG)
"Satria novonoina ho antsika ny zanak'ondrin'ny Paska antsika: Kristy" (1 Kor. 5,7).
Tsy tiantsika ny tsy hanaiky ny zava-niseho lehibe izay niseho tany Ejipta efa ho 4000 taona lasa izay rehefa nanafaka ny Isiraely tamin'ny fanandevozana Andriamanitra. Loza folo, izay voaresaka ao amin'ny Eksodosy, dia nilaina hanozongozona ny hamafin'ny Farao, ny fireharehana ary ny fanoherana feno fireharehana amin'Andriamanitra.
Ny Paska no pesta farany sy farany farany mahatsiravina tokoa ka maty ny lahimatoa rehetra, na olona na biby, rehefa nandalo ny Tompo. Novonjen’Andriamanitra ny Isiraelita mpankatò rehefa nodidiana ny hamono ny zanak’ondry ny 14 andro tamin’ny volana Abib ary naparitaka ny ra teo am-baravarana sy teo amin’ny tolam-baravarana. (Jereo ny Eksodosy 2). Ao amin'ny andininy faha 11 dia antsoina hoe Paska an'ny Tompo izany.
Betsaka angamba no nanadino ny Paska taloha, fa Andriamanitra kosa dia mampatsiahy ny olony fa i Jesosy Paska no voaomana ho Zanak'ondrin'Andriamanitra hanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. (Jaona 1,29). Maty teo amin’ny hazo fijaliana izy taorian’ny nandrovan’ny fatiny sy nampijaliana tamin’ny antsibe ary ny lefona no nanindrona ny sisiny ary nisy ra nivoaka. Niaritra izany rehetra izany izy, araka ny efa voalaza mialoha.
Namela ohatra ho antsika izy. Tamin'ny Paska farany izay resahintsika ho sakramenta izao dia nampianariny ny mpianany hanasa ny tongotr'izy ireo ho ohatra fanetrentena. Ho fahatsiarovana ny fahafatesany dia nomeny mofo sy divay kely izy ireo ho fandraisana anjara amin'ny fihinanana ny nofony ary fisotroan'ny rany (1 Korintiana 11,23: 26-6,53, Jaona 59: 13,14-17 ary Jaona). Rehefa nandoko ny ran'ondrilahy teo amin'ny tokonam-baravarana sy teo an-tokonam-baravarana ny Isiraelita tany Ejipta, dia fahitana mialoha ny ran'i Jesosy ao amin'ny Testamenta Vaovao izay nafafy teo am-baravaran'ny fontsika izany ka nosasana ny feon'ny fieritreretantsika ary madio ny fahotantsika rehetra. diovina ny rany (Hebreo 9,14:1 sy 1,7 Jaona). Ny tambin'ny ota dia fahafatesana, fa ny fanomezana tsy misy vidiny avy amin'Andriamanitra dia fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika. Tsaroantsika ny sakramentan'i Amo momba ny fahafatesan'ny Mpamonjintsika, ka tsy hadinontsika ny fahafatesana maharary sady mahamenatra indrindra teo amin'ny hazo fijaliana nitranga 2000 taona lasa izay noho ny fahotantsika.
Ilay Zanaka malala, izay nirahin 'Andriamanitra Ray ho Zanak'ondrin' Andriamanitra handoa ny vidim-panavotana ho antsika, dia iray amin 'ireo fanomezana lehibe indrindra ho an' ny olona. Tsy mendrika an'io fahasoavana io isika fa nifidy antsika tamin'ny fahasoavany Andriamanitra hanome antsika fiainana mandrakizay amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy Zanany malala. Ny Paska Jesosy Kristy dia maty tamin-tsitrapo mba hamonjy antsika. Novakiantsika ao amin'ny Hebreo 12,1: 2 ny hoe: "Koa satria manana vavolombelona rahona be toy izany manodidina antsika isika, dia atsipintsika ny zavatra rehetra izay mitaraina amintsika sy ny ota izay manelingelina antsika, ary handeha isika amim-paharetana. ao anatin'ny tolona natokana ho antsika ary miandrandra an'i Jesosy, ilay nanombohana sy mpanefa ny finoana, izay, na dia afaka nahazo fifaliana aza izy, dia niaritra ny hazo fijaliana ary tsy nanala baraka ary nipetraka teo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. »